Dugsiga Xuseen Miigane Ee Degmada Dila Oo Abaal marin Gudoonsiiyey Gabadhii Kaalinta Koowaad U Gashay Dugsiyada Dhex Ee G/ Awdal | Lughaya.Com
Borama LUGHAYA.COM-Munaasibad balaadhan oo lagu maamuusayey sanad dugsiyeedka cusub ee dugsiga Xuseen Miigane degmada DILA ayaa maa maanta lagu soo bandhigay laba arday oo gabdho ah kuwaasi oo galay kaalimaha koowaad iyo la baad ee imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada sideedaad ee gobolka Awdal .
Munaasibadani oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka dugsigaasi Xuseen Miigane ee degmada Dila waxa ka qayb galay gudoomiye xigeenka waxbarashada gobolka Awdal Aaadan Faarax Maxamuud , Maayerka degmada Dila Mustafe Cabdi Xadi , gudoomiyaha waxbarashada degmada Dila Cali Muuse ardaydaiyo macalimiinta dugsiyada Dila .
Munaasibadani ayaa ugu horayn ka warbixiyey maaamulaha Xuseen Miigane ee degmada Dila waxaanu sheegay in uu maanta aad ugu faraxsanyahay in ardayada kaalinta koowaad gashay ay waxkabarato dugsigani waxaanu ku dhiiri galiyey in ardayda kale na in ay ku dadaalaan in ay hiigsadaan kaalmaha hore
Gudoomiye xigeenka waxbarashada ee gobolka Awdal mudane aadan faarax muuse ayaa oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa aad u amaanay ardayda degmada Dila waxaanu yidhi .” Runtii tobanka arday ee gobolka Awdal ugu horeeyey imtixaanaadkii dugsiyada hoose dhexe sedex ka mid ah waxa ay waxka barteen dugsiyada Dila iyada oo gabadha ugu horaysa ee kaalinta koowaad u gashay gobolka Awdal ay ka soo jeedo dugsigan Xuseen Miigane ee Dila .”
Maayerka degmada Dila Mustafe Cabdi Xadi ayaa ugu danbayntii waxa uu tibaaxay in degmada Dila ay waligeed ba ahayd meel tacliinta ku caan ah dugsiyadeeduna ay yihiin kuwo qadiimi ah iyada oo dadka reer Dilaadna ay yihiin dad waxbarashada jecel ,waxaani u hambalyeeyey ardayda ku guulaysatay in ay degmada u soo hooyaan sharaf.
Gabagabadii ayaa waxa munaasibadaasi abaal marino lagu gudoonsiiyey gabadhaha kaalmaha koowaad iyo labaad u galay dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Awdal